Wadada Wadada Diyaaradaha ee Gayrettepe Istanbul si loo furo dhamaadka 2020 | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulWadada Tareenka Caalamiga ah ee Gayrettepe ee Istanbul ayaa la furi doonaa dhamaadka 2020
18 / 11 / 2019 34 Istanbul, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY
gayrettepepe istanbul metro ayaa la furi doonaa dhamaadka sanadka
Qadka Gaytetepepe Subway ee Magaalada Istanbul oo la furi doono dhamaadka sanadka 2020; Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, oo sidoo kale qiimeyn ku sameeyay garoonka diyaaradaha Istanbul, ayaa sheegay in dhismaha saddexaad ee waddo-dhiska uu hada socdo isla markaana khadka Gayrettepe ee Istanbul Halkalı khadka ayaa shaqeysiin doona dhamaadka 2021 ayaa yiri
xoriyadda Waxaan ku khasabtay bisha June for furitaanka runway saddexaad Turhan oo marti ku ahaa on Xafiiska Ankara, laakiin 29 u muuqataa in ay u soo galeen adeegga ee October, "ayuu yiri oo raaciyay:" Sidaas darteed, dunida oo kaliya lagu gaari doonaa in Turkey awood u leh inay soo caga isku mar on saddex darajo ee USA. Tani waxay yareyn doontaa waqtiyada taksi. Dhaleecaynta madaarka cusub hadda waxa haray hal dood oo keliya. Waxay yiraahdaan waqtiyada taksi waa dheer yihiin. Mar kasta ayaan cabbiraa. 27-28 ugu badnaan waxaa laga heli karaa daqiiqado. Wadada saddexaad, waqtigaan aad ayuu u gaaban doonaa. ”
Wasiirka Turhan wuxuu cadeeyay in khadka Gayrettepe la adeegsan doono dhamaadka sanadka soo socda garoonka diyaaradaha ee Istanbul. Halkalı khadka ayaa shaqeysiin doona dhamaadka 2021 ayaa yiri. hawl ayaan gelinaynaa. Turhan wuxuu sheegay in awoodda ay ku qaadi karto 350 kun oo rakaab ah maalin kasta la gaari doono jihada garoonka diyaaradaha wuxuuna yiri, bilir waxaan dhihi karaa shaqooyinkeenna tareenka korontada ee maxalliga ah iyo kuwa qaranku waxay gaareen heer la dhammaystiro. Mashruucu wuxuu kusocdaa warshadeena TÜLOMSAŞ ee Eskişehir. Waxaan tijaabin doonaa gaari wadida sanadka 2020. Tusaalaha koowaad kadib, waxaan bilaabeynaa wax soo saar ballaaran iyadoo la jaan qaadaya shuruudaha soo socda ”.
Gaziray, Dhamaadka 2020
Madaarka Garoonka diyaaradaha ee Istanbul Free free ilaa dhamaadka Febraayo!
Gegada Diyaaradaha Seddexaad ee Istanbul
Subway ee garoonka diyaaradaha Istanbul
Goorma ayaa la dhisayaa marinnada dhulka hoostiisa mara ee Istanbul
Garoonka diyaaradaha ee Istanbul-Halkalı dhulka hoostiisa
Halkalı Madaarka Istanbul Gayrettepe Subway